Qiimaha lagu iibsado korontada dalka oo kor u kacday | Star FM
Home Wararka Kenya Qiimaha lagu iibsado korontada dalka oo kor u kacday
Waxaa sare u kacay qiimaha lagu iibsado korontada dalka.
Kenyaanka ayaa halkii dhibcood bixin doono 26.57 oo shillinka bilaha soo socda.
Waxaa arrintan loo sababeeyay ka dib markii bishaan sare loo qaaday canshuurta dalka.
Tani ayaa noqon doonta qiimihii ugu sarreeyay ee lagu iibsado dhibcaha ee adeegga korontada ee dalka, tan iyo dib u eegistii lagu sameeyay jadwalka canshuuraha bishii 11-aad ee sanadkii 2018-kii.
Bishii hiore ayay ahayd markii Kenyaanka ay bixiyeen lacag dhan 24.77 shillin halkii dhibcood ee korontada oo ay isticmaaleen .
Maamulka maareeya kheyraadka biyaha ee dalka WRMA oo qayb ka ah biilasha korontada ayaa 80 jeer kor u kacay oo ilaa 1.6 shillin sida ku cad warbixin ay shalay soo saartay maamulka maareeya tamarta iyo batroolka dalka ee EPRA.
Waxaa arrinkan loo sababeyay heshiis dhex maray dowladda dhexe iyo bangiga adduunka bishii hore kaas oo kor u qaaday shuuruudaha sharciyeynta ee shirkadaha biyaha si loo daboolo kharashaadka ku baxaya howlgalka iyo dayactirka.
Kor u kaca qiimaha korontada ee bishaan ayaa la filayaa inuu si weyn u saameeyo nolosha shacabka Kenyaanka ah kuwaas oo durbadiiba dareemaya ciriiriga la xiriira sare u kaca ku yimid qiimaha shidaalka maadaama batroolka iyo naaftada lagu iibinayaa qiimaha ugu sarreeya abid ee taariikhda dalka.
Previous articleDHAGEYSO:William Ruto oo mudanayaasha baarlamaanka uga digay inay dib u soo nooleeyaan wada hadalladii BBI
Next articleBooliska oo baaraya dilka muwaadin Shiinees ah oo ka dhacay Athi River
Nin burburiyay agab isgaarsiineed oo lagu xiray Murang’a
Ciidamada ammaanka ee ismaamulka Murang’a ayaa gacanta ku dhigay eedeysane lagu magacaabo Lenny Ng’ang’a oo loo haysto inuu burbur u gaystay agabka shirkadda isgaarsiinta...
DHAGEYSO:Ruto :Deegaan kasta waxaan ka sameynayna sanduuqa horumarinta ganacsatada yaryar
Madaxweyne ku xigeenka dalka William Ruto oo weli ololihiisa siyaasadeed ka wado gobolka xeebta ayaa ballanqaaday haddii uu sanadka 2022-ka ku guulaysto xilka madaxtinimada...
DHAGEYSO:Xoghayaha wasaaradda arrimaha gudaha oo ka hadlay u diyaar garowga xuska maalinta halyeeyada
Xoghayaha joogtada ah ee wasaaradda arrimaha gudaha iyo isku duwidda howlaha qaranka Dr. Karanja Kibicho ayaa sheegay inuu meel wanaagsan maraya diyaar garowga ku...
Turkiga oo diyaarado dagaal ka iibsanaya Maraykanka
Dhisme ka kooban 9 dabaq oo ku dumay Ruiru
Wararka naga soo gaaraya xaafadda Membley ee deegaan baarlamaneedka Ruiru ee ismaamulka Kiambu ayaa sheegaya in halkaasi uu ku dumay dhisme ka koobnaa 9...
Kenya oo laga xaqiijiyay 74 xaaladood oo cusub oo COVID19
Wasaaradda caafimaadka ee dalka ayaa maanta sheegtay in 24-kii saacadood ee ugu dambeeyay uu cudurka COVID19 haleelay 74 qof oo dheeraad ah ka dib...
Masjidka barakaysan ee Makkah oo si buuxdo loo furay
Madaxweynaha dalka Turkiga Recep Tayyip Erdogan ayaa sheegay inay wada hadallo la yeelanayaan Maraykanka si ay uga soo iibsadaan diyaaradaha dagaalka nooca loo yaqaano F-16...